Imishini ekhipha umoya iqoqa uthuli endlini yokugcina izimpahla e-Steve Biko Academic Hospital | Scrolla Izindaba
Imishini ekhipha umoya iqoqa uthuli endlini yokugcina izimpahla e-Steve Biko Academic Hospital
Ngesikhathi sokushoda imishini ekhipha umoya ezweni lonke kanye nezigcawu ezishaqisayo njengoba iziguli zegagasi lesibili le-Covid zilethwa ezibhedlela ezweni lonke, ibalelwa kweyizi-9 000 imishini ekhipha umoya ebutha uthuli endaweni yokugcina izimpahla eKapa.
Izimo ezishaqisayo esibhedlela sase-Steve Biko Academic e-Tshwane zisabalale ezinkundleni zokuxhumana kule mpelasonto, nokuholele ekutheni uNdunankulu wase-Gauteng uDavid Makhura ahambele lesi sibhedlela esinezinkinga.
Izithombe zikhombisa izimo eziminyene ngokweqile, iziguli zelashelwa emvuleni, nezidumbu zishiywe ngaphandle ematendeni.
NgeSonto, uMnyango wezeMpilo e-Gauteng ukuqinisekisile ukuthi ziningi izithombe ezithathwe esibhedlela.
Isibhedlela kubikwa ukuthi sesiphelelwe yimishini ekhipha umoya.
Okhulumela uMnyango wezeMpilo e-Gauteng, uKwara Kekana, ukuvumile ukuthi isibhedlela singaphansi kwengcindezi enkulu, njengoba kubekwa namatende amaningi ukubhekana nesibalo seziguli esikhulayo.
“Lesi sikhungo sibone ukwanda okukhulu kwezibalo ze-Covid-19 kusukela ngoZibandlela ngowezi-2020,” uyasho.
“Ziyanda iziguli ezigula kakhulu futhi zidinga ukunakekelwa ngendlela ebucayi, ezinye zifika ngamaqembu.”
Kodwa-ke, uSolwazi uJustin Jonas, uchwepheshe oyiNhloko kwezobuchwepheshe e-South African Radio Astronomy Observatory, uthe kukhona cishe imishini yokukhipha umoya engaba yizi–9 000 esele endlini yokugcina izimpahla yize kwenzeka ukuthelelana okuningi kwe-Covid-19.
Lokhu kuqinisekiswe nguKhulu Phasiwe, okhulumela i-South African Radio Astronomy Observatory, othe sebethunywe ukuphatha i-National Ventilator Project nguMnyango wezeMpilo.
“Senze imishini yokukhipha umoya eyizi-20 000, kwathi engama-7 000 yaleyo yasatshalaliswa ngumnyango wezeMpilo ezibhedlela zikahulumeni kwathi engama-2 000 yanikezwa i-Gift of the Givers,”.
“Ingaphezu kweyi-9 000 imishini yokukhipha umoya endlini yokugcina izimpahla eKapa kanti ibelokhu ilungile kusukela ngoMfumfu ngonyaka odlule. UMnyango wezeMpilo uyakwazi lokhu. UMnyango udinga ukunquma ukuthi kumele uye kuphi,” kusho uPhasiwe.
Abakwa-Scrolla.Africa abakwazanga ukuthola ukuphawula komkhulumeli woMnyango wezeMpilo uPopo Maja.
Izithombe ezesabekayo ezisabalalayo zesibhedlela sase-Steve Biko ziqinisekisile ukuthi izwe lisengozini enkulu yokukhungathwa uhlobo olusha olunolaka lwe-Covid-19.
Njengoba omunye umhlaziyi wezokuxhumana ephawulile: “Sonke sizwa ngokufa kwabantu nsuku zonke. Asivamile ukuya emngcwabeni, ezinkonzweni zenkolo, noma ngisho nokuya endlini yomndeni oshonelwe ukuyoduduza.”
NgoLwesihlanu olwedlule, mhla ziyisishiyagalombili kuMasingana, iNingizimu Afrika iqophe isibalo esiphezulu sokuthelelana atholwa nsuku zonke, esiyizi-21,980, isibalo sonke sesimi ngaphezu kwezigidi eziyi-1.2.
Isibalo sabantu abashonile esidalwe yi-Covid-19 sesifinyelele ku-33,163.
Khonamanjalo, iNxusa laseMelika eNingizimu Afrika, uLana Marks, umemezele ngoMsombuluko ukuthi uyelulama ngemuva kokuhlala izinsuku eziyishumi egumbini le-ICU ngenxa ye-Covid.